Izindaba - Okufanele Ukufune ku-Monitor Monitor
Okufanele Ukufune ku-Monitor Monitor
AmaGamers, ikakhulukazi ama-hardcore, ayizidalwa eziqaphelayo, ikakhulukazi uma kukhethwa umqaphi ophelele werig yokudlala. Ngakho-ke babheka ini lapho bethenga nxazonke?
Lezi zici ezimbili ziyahambisana futhi cishe njalo ezokuqala ezicatshangelwayo ngaphambi kokuthenga i-monitor. Isikrini esikhulu nakanjani singcono uma ukhuluma ngokudlala. Uma igumbi livumela, khetha i-27-incher yokuhlinzeka ngezindlu eziningi zalezo zithombe ezibonisa iso.
Kepha isikrini esikhulu ngeke silunge uma sinesinqumo esingajabulisi. Hlela okungenani isikrini esigcwele se-HD (incazelo ephezulu) ngesisombululo esiphezulu samaphikseli ayi-1920 x 1080. Abanye abaqaphi abasha abangama-27-intshi banikela ngeWide Quad High Definition (WQHD) noma ngamaphikseli angama-2560 x 1440. Uma umdlalo, kanye ne-rig yakho yokudlala, isekela i-WQHD, uzokwelashwa ngemidwebo emihle kakhulu kune-HD ephelele. Uma imali kungeyona inkinga, ungaya nakwi-Ultra High Definition (UHD) enikezela ngamaphikseli angama-3840 x 2160 wenkazimulo yehluzo. Ungakhetha futhi phakathi kwesikrini esinokubukeka kwesilinganiselo esingu-16: 9 nokukodwa okune-21: 9.
Isilinganiso sokuvuselela nempendulo ye-Pixel
Izinga lokuqabula ukuthi isilawuli sithatha kangaki ukwenza kabusha isikrini ngomzuzwana. Kukalwa ku-Hertz (Hz) futhi izinombolo eziphakeme zisho izithombe ezingafiphele kancane. Abaqaphi abaningi bokusebenzisa okujwayelekile bakalwa ngo-60Hz okuhle uma wenza nje izinto zasehhovisi. Ukufunwa kwemidlalo okungenani okungu-120Hz kwempendulo yesithombe esheshayo futhi kuyimfuneko yokuqala uma uhlela ukudlala imidlalo ye-3D. Ungakhetha futhi ama-monitors afakwe i-G-Sync neFreeSync enikezela ukuvumelanisa nekhadi lemidwebo elisekelwayo ukuvumela amazinga wokuvuselela ahlukahlukene wesipiliyoni sokudlala esisheshayo. I-G-Sync idinga ikhadi lehluzo elisuselwa kuNvidia ngenkathi iFreeSync isekelwa yi-AMD.
Impendulo ye-pixel yokuqapha yisikhathi lapho i-pixel ingashintsha kusuka kokumnyama iye kokumhlophe noma ukusuka komunye umthunzi ompunga iye komunye. Kukalwa ngama-millisecond bese kwehliswa izinombolo ngokushesha impendulo ye-pixel. Impendulo ye-pixel esheshayo isiza ukunciphisa amaphikseli wesipoki adalwe yimifanekiso eshukumisayo esheshayo eboniswa kumonitha okuholela kusithombe esibushelelezi. Impendulo efanelekayo ye-pixel yokudlala ama-millisecond ama-2 kepha ama-millisecond ama-4 kufanele alunge.
Iphaneli yezobuchwepheshe, okokufaka kwevidiyo, nabanye
Amapaneli we-Nematic noma we-TN ashibhile futhi anikezela ngamanani wokuvuselela okusheshayo nempendulo ye-pixel ebenza baphelele ekudlaleni. Kodwa-ke abanikeli ama-engeli wokubuka abanzi. Ukuma okuqondile noma i-VA kanye ne-In-Plane switching (IPS) kunganikela ngokuqhathanisa okuphezulu, umbala omuhle kakhulu, nama-engeli wokubuka abanzi kepha kuthinteka ezithombeni zezipoki nakwizinto zobuciko ezinyakazayo.
Ukuqapha okunokufakwayo kwamavidiyo amaningi kuhle uma usebenzisa amafomethi amaningi wokudlala njengama-consoles nama-PC. Izimbobo eziningi ze-HDMI zinhle uma udinga ukushintsha phakathi kwemithombo yamavidiyo amaningi njengethiyetha yakho yasekhaya, i-console yakho yomdlalo, noma i-rig yakho yokudlala. I-DisplayPort iyatholakala futhi uma umqaphi wakho esekela i-G-Sync noma iFreeSync.
Abanye abaqaphi banamachweba e-USB wokudlala ngqo ama-movie kanye nezipikha ezine-subwoofer yohlelo oluphelele lokudlala.
Yisiphi isayizi yokuqapha ikhompyutha ehamba phambili?
Lokhu kuncike kakhulu ekuxazululeni okubhekiswe kukho nokuthi unesikhala esingakanani sedeski. Ngenkathi okukhudlwana kubukeka kubukeka kangcono, kukunikeza isikhala esithe xaxa sesikrini somsebenzi nezithombe ezinkulu zemidlalo nama-movie, bangakwazi ukwelula izinqumo ezingeni lokungena njenge-1080p emikhawulweni yokucaca kwazo. Izikrini ezinkulu zidinga nendawo ethe xaxa etafuleni lakho, ngakho-ke sizoxwayisa ngokuthenga i-ultrawide enkulu efana ne-JM34-WQHD100HZ ohlwini lwethu lwemikhiqizo uma usebenza noma udlala etafuleni elikhulu.
Njengomthetho osheshayo wesithupha, i-1080p ibukeka kahle ize ifike cishe kuma-intshi angama-24, kuyilapho i-1440p ibukeka kahle ize ifike ngamasentimitha angama-30. Ngeke ngincome isikrini se-4K noma sincane kunama-intshi angu-27 njengoba ungeke ubone inzuzo yangempela yalawo amaphikseli athe xaxa kunalokho okuyisikhala esincane ngaleso sinqumo.
Ingabe iziqaphi ze-4K zilungele ukudlala?
Bangaba njalo. I-4K inikela ngokuvelele kwemininingwane yokudlala futhi emidlalweni yasemkhathini ingakunika izinga elisha lokucwiliswa, ikakhulukazi kwizibonisi ezinkulu ezingabonisa ngokugcwele leyo nsimbi yalawo amaphikseli kuyo yonke inkazimulo yayo. Lokhu kukhonjiswa okuphezulu kwenza kahle emidlalweni lapho amazinga wohlaka angabalulekile njengokucaca kokubonakalayo. Lokho kusho, sinomuzwa wokuthi abaqaphi bezinga eliphezulu lokuvuselela bangaletha umuzwa ongcono (ikakhulukazi emidlalweni eshesha kakhulu njengabadubuli), futhi ngaphandle kokuthi unamaphakethe ajulile wokukhipha ikhadi lemifanekiso elinamandla noma amabili futhi, awuyena uzothola lawo mazinga wozimele ku-4K. Isibonisi esingu-27-intshi, 1440p kuseseyindawo emnandi.
Futhi khumbula ukuqapha ukusebenza manje sekuvame ukuxhumaniswa nobuchwepheshe bokulawulwa kohlelo olufana neFreeSync ne-G-Sync, ngakho-ke bhekela lobu buchwepheshe namakhadi wehluzo ahambisanayo lapho wenza izinqumo zokuqapha imidlalo. IFreeSync eyamakhadi emidwebo ye-AMD, kuyilapho i-G-Sync isebenza kuphela nama-GPU kaNvidia.
Yikuphi okungcono: i-LCD noma i-LED?
Impendulo emfushane ukuthi bobabili bayafana. Impendulo ende ukuthi lokhu ukwehluleka kokumaketha kwezinkampani ekudluliseni kahle ukuthi iyini imikhiqizo yayo. Namuhla ama-monitors amaningi asebenzisa ubuchwepheshe be-LCD abuyiselwa emuva ngama-LED, ngakho-ke uma uthenga i-monitor kungumbukiso we-LCD nowe-LED. Ukuthola eminye incazelo kubuchwepheshe be-LCD ne-LED, sinomhlahlandlela wonke ozinikele kuwo.
Lokho kusho ukuthi kunezibonisi ze-OLED okufanele zicatshangelwe, yize la mapaneli engakabi nomthelela emakethe yedeskithophu okwamanje. Izikrini ze-OLED zihlanganisa umbala nokukhanya kube yiphaneli elilodwa, elidume ngemibala yalo egqamile nesilinganiso sokuqhathanisa. Ngenkathi lobo buchwepheshe benza amagagasi kumathelevishini iminyaka embalwa manje, baqala nje ukwenza isinyathelo sokuzama ukungena ezweni labaqaphi bedeskithophu.
Uhlobo luni lokuqapha olungcono kakhulu emehlweni akho?
Uma unenkinga yamehlo, funa ama-monitors akhele isoftware yokuhlunga eyakhelwe ngaphakathi, ikakhulukazi izihlungi eziklanyelwe ukunciphisa izinkinga zamehlo. Lezi zihlungi zenzelwe ukuvimba ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuningi, okuyingxenye yesibonisi esithinta kakhulu amehlo ethu futhi esibhekene nezinkinga eziningi zamehlo. Noma kunjalo, ungalanda futhi izinhlelo zokusebenza zesoftware yokuhlunga iso nganoma iluphi uhlobo lokuqapha olutholayo